Waa maxay dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdooda gaabiso? | Skolverket nyanlända
Waa maxay dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdooda gaabiso?
Dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdooda gaabiso waa inuu siiyaa ardeyda aanu caqligoodu dhameystirneen waxbarasho ku habboon ardey kasta inta awoodiisa ah. Waxbarashadu waa iney siisaa ardeyga aqoon guud iyo qiimaha bina’aadamka, horumarinta kalsoonida shaqsiga, wax la wadaagida bulshada iyo aasaas wanaagsan si uu nolosha bulshada uga qeyb-qaadan karo. Dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdoodu gaabiso wuxuu ka kooban yahay maaddooyin ama dhowr maaddo oo kala duwan. Waxbarashada waxa xitaa kamid ahaan kara maaddooyinka ku qoran dugsiga aasaasiga qorshaha koorsooyinka.
Qeyb kamid ah dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdoodu gaabiso waxa la dhahaa dugsiga tababarka. Dugsiga tababarka waxaa loogu talagalay ardeyda aan awoodin in ay bartaan dhammaan maaooyinka ama qeyb ka mid ah waxbarashada maaddooyinka. Dugsiga tababarka kama koobna maadooyin ee wuxu ku dhisan yahay shan mawduuc:
Dhaqdhaqaaqa xubnaha jirka
dhaqdhaqaaqa nolol maalmeedka
Yaa dhigta dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdoodu gaabiso?
Carruurta aanu caqligoodu dhameystirneen waxa loo qorsheeyay dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdoodu gaabiso, oo wuxu gali booska dugsiga aasaasiga.
Qeyb kamid ah dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdoodu gaabiso waxa la dhahaa dugsiga tababarka. Dugsiga tababarka waxaa loogu talagalay ardeyda aan awoodin in ay bartaan dhammaan maadooyinka ama qeyb ka mid ah waxbarashada maaddooyinka. Dugsiga tababarka kama koobna maadooyin ee wuxu ku dhisan yahay shan mawduuc:
Ardeyga markuu dhammeeyo dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdoodu gaabiso waxa la siin caddeyn ku saabsan waxbarashada ay dhigteen. Hadii ardeyga ama waalidka ardeygu ay soo dalbadaan waxa caddeynta waxbarashada loogu dari qiimeyn aqoonta ardeyga ah. Qiimeynta aqoonta ardeyga waxey ku saabsanaan fursadaha ardeyga u furan hadii uu waxbarasho sii dhiganayo.
Hadii ardeyga ama waalidka ardeygu soo dalbadaan waxa ardeyga laga siin shahaado maadooyinka lagu dhigo dugsiga aasaasiga ee ardeyda maskaxdoodu gaabiso, hal mar lixdii biloodba laga bilaabo fasalka 6-aad ilaa dhammaadka xilliga dayrta fasalka 9-aad iyo mar kasta oo maaddo la soo gabagabeeyo. Shahaado ahaan waa in la isticmaalaa darajooyinka A, B, C, D ama E . Ta ugu sareysaa waa A, tan ugu hooseysaana waa E. Ardeyga aan buuxin shuruudaha shahaadada E ee maaddada uu dhigtay, wax shahaado ah looma qorayo.